शनिकाे साढे साती ग्रहले यी ५ राशिलाई असर गर्दैन, शनि रहन्छन् दयालु - News 88 Post
शनिकाे साढे साती ग्रहले यी ५ राशिलाई असर गर्दैन, शनि रहन्छन् दयालु
December 23, 2021 N88LeaveaComment on शनिकाे साढे साती ग्रहले यी ५ राशिलाई असर गर्दैन, शनि रहन्छन् दयालु
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार कर्म दिने शनिदेवको सधैँ खराब दृष्टि हुन्छ भन्ने होइन । शनिदेवले सबैलाई कर्म अनुसार फल दिनुहुन्छ। अर्थात् राम्रो कर्मको राम्रो नतिजा र नराम्रो कर्मको नराम्रो परिणाम । यदि कुनै व्यक्तिको कर्म खराब छ भने शनिले उसलाई कष्ट दिन्छन्।
तर कतिपय राशिहरु यस्ता मानिन्छन् जसमा शनिको दशाले अन्य राशिहरुमा जति प्रभाव पार्दैन । जान्नुहोस् यी राशिफल के के हुन् ।
1. तुला राशि: यी व्यक्तिहरूमाथि शनिदेवको विशेष कृपा हुन्छ। यस राशिको शासक ग्रह शुक्र हो। जससँग शनिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ। तुला राशिमा शनि उच्च छ। अहिले यो राशिका मानिसहरुका लागि धैया चलिरहेको छ ।
तर शनिको कुनै पनि दशाले तुला राशिका मानिसहरूमा त्यति नराम्रो प्रभाव पार्दैन जति अरू मानिसहरूमा पर्छ। यस राशिमा शनिदेवको पूजा गरेर शनि ग्रहलाई बलियो बनाउन प्रयास गर्नुपर्छ।
2. धनु: यस राशिको शासक ग्रह बृहस्पति हो। शनिसँग समान सम्बन्ध भएको मानिन्छ। अर्थात् यी दुई ग्रह न त एकअर्काका शत्रु हुन् न धेरै असल साथी हुन् । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार शनिको साढेसाती वा शनिको धैय्याले यस राशिका मानिसमा त्यस्तो नराम्रो प्रभाव पार्दैन । यो राशिका व्यक्तिहरुको लागि शनिको दशा सामान्य रहन्छ । यो राशिका लागि शनि सतीको अन्तिम चरण चलिरहेको छ ।
3. मकर: शनि यस राशिको शासक ग्रह हो र हाल यो राशिमा गोचर गर्दैछ। ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मकर राशिका मानिसहरुमाथि शनि ग्रहको विशेष कृपा हुन्छ । यो राशिका मानिसका लागि शनि सतीको समय त्यति कष्टदायी हुँदैन । मकर राशिका लागि शनि सतीको दोस्रो चरण चलिरहेको छ ।
4. कुंभ: शनि ग्रह पनि यस राशिको शासक ग्रह हो। जसका कारण कुम्भ राशिका मानिसहरुमा पनि शनिदेवको विशेष कृपा हुन्छ । अहिले यो राशिका मानिसका लागि शनि सतीको पहिलो चरण चलिरहेको छ ।
५. मीन: यस राशिको स्वामी ग्रह देवता बृहस्पति हो। तिनीहरूसँग शनिको सामान्य सम्बन्ध छ। शनि उहाँको शत्रु वा असल मित्र पनि होइन । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार यस राशिका मानिसका लागि शनिको अवस्था खासै पीडादायी हुँदैन ।
‘पुरोहितका गाईहरू’ लाई पार्टीमा फर्कन मसालको आग्रह
महिलाले साँझ परेपछि भुलेर पनि कहिल्यै नगर्नु यी काम, अनिष्ट हुन्छ शास्त्रमा लेखिएकाे छ यस्ताे !
August 22, 2021 August 22, 2021 N88